हिन्दू धर्मावलम्विहरुको लागि श्रावण शुक्ल पूर्णिमा एक महत्वपुर्ण दिन हो । यस दिनमा धेरै चाडहरु पर्दछन् र सबै चाडहरुको समष्टिगत रुप नै जनै पूर्णिमा अर्थात् रक्षा बन्धन हो । वैदिक साधनामा लागेका सबै देवता, ऋषिहरु र आफ्ना पुर्वजहरुलाईसमेत स्मरण एवम् पुजा गरि विधिपुर्वक रक्षा सुत्र (जनै) मन्त्रण गरी..
काठमाडौं । साउन महिना भगवान शिवका लागि खाश हुन्छ । यो वर्ष साउन महिनाको पहिलो तिथि अर्थात प्रतिपदा तिथी १० साउनमा परेको छ । साउने मास पनि १० गतेदेखि नै शुरु हुँदैछ । साउन र शिव भगवानको गहिरो सम्बन्ध रहेको छ । साउन महिना सुन्नेवित्तिकै हाम्रो आँखामा मुसलधारे पानी र पानीमा गरिने भगवान शिव को भक्तिको..
झट्ट सुन्दा विश्वास लाग्दैन होला तर सेक्सले मान्छेलाई सुन्दर बनाउने अनुसन्धानले देखाएको छ । स्वास्थ्य ढंगले गर्ने सेक्सले मानिसलाई सुन्दर बनाउने कुरा अनुसन्धानमा उल्लेख छ । मानिस सुन्दरताका लागि व्यूटी पार्लर धाउने सँगै महँगा सामाग्री उपयोग गर्न चाहन्छन् । तर खानपानमा ध्ययन दिएर गर्ने सेक्सले..
हिन्दुहरुको प्रमुख चाड महाशिवरात्रि अथवा शिवरात्री पनि हो । विशेषगरी यो भगवानशिवको प्रमुख पर्व हो । शिवजी उत्पत्ति हुनुभएको रातका नामवाट नामकरण भएको यो पर्व कालरात्रि मोहरात्रि सुखरात्रि र शिवरात्रि नामक चार प्रमुख रात्रिमध्ये एक पवित्र पर्वका रूपमा पुराणहरूमा वर्णित छ । फागुन कृष्ण चतुर्दशीका..
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस : रन्जु प्याकुरेल
सोमवार, फाल्गुन २४, २०७७ मा प्रकाशित
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस हरेक बर्ष ८ मार्चका दिन विभिन्न कार्यक्रमहरुको आयोजना गरेर मनाइन्छ।हाम्रोदेशमा यहि फाल्गुन २४ गते १११औं महिला दिवश मनाउन लागिएकोछ।महिला बिकाश,सम्मान,र अधिकारका बिषयहरु मुख्य रुपमा उठ्ने गरेपनि महिला र पुरुष बराबर हुन भन्ने कुराको सन्देश दिनु नै यस दिवसको मुख्य..
बृहस्पति ग्रहको बार गुरुवार हो । हिन्दुधर्ममा नवग्रहमा बृहस्पति ग्रह र बारमा गुरुबार श्रेष्ठ मानिन्छ । आजहामी बृहस्पति ग्रहलाई किन सर्वश्रेष्ठ मानिन्छ त्यसको बारेमा चर्चा गर्छौ । सौर्यमण्डलमा सुर्यको आकारपछि बृहस्पतिको नम्बर आउछ । यो ग्रह ब्यासबाट लगभग डेढ लाख किमी टाढा र सुर्यबाट ७७ करोड ८० लाख..
एजेन्सी। हिन्दू धर्म संस्कृतिमा रुद्राक्षको महत्व विशेष रुपमा रहने गरेको छ । रुद्राक्षले मानिसमा हुने कुनै पनि हानिकारक ऊर्जाबाट बचाउने विश्वास गरिन्छ । यसको प्रयोग तपस्वीले मात्रै नगरी सांसारिक जीवनमा रहेका व्यक्तिले पनि गर्छन् । रुद्राक्षको माला लगाउनु धार्मिक महत्वका साथसाथै वैज्ञानिक..
काठमाडौँ । बहुप्रतिक्षित र सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण निर्णय भनेर हेरिएको कक्षा ११ को नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धिको मुद्दामा फैसला गर्न सर्वोच्च अदालतले पुस २७ गते छलफलको लागि सबै पक्षलाई बोलाएको छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६,पाठ्यक्रम विकास केन्द्रविरुद्ध कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम..
काठमाडौं । अहिलेको समयमा कुनै युवतीसँग वा युवकसँग डेटमा जानु सामान्य मान्न थालिएको छ । त्यस्तै, पहिलोपटक डेट ( first date ) मा जाँदै हुनुहुन्छ र पार्टनरसँगको सम्बन्ध सुमधुर र दिगो बनाउन चाहनुहुन्छ ? तर चाहेर पनि तपाईं कहिलेकाँही आफु अनुकुल गर्न सक्नुहुँदैन । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव तपाईंको पार्टनरलाई..
एजेन्सी । महिलाहरु र पुरुष एक अर्काका परिपुरक हुन् । उनीहरु एकअर्कामा आकर्षित हुने प्राकृतिक गुण हो । उनीहरु यसरी किन आकर्षित हुन्छन् भन्ने बारेमा वैज्ञानिकहरुले पनि अझै मेसो पाएका छैनन् । हालै भएको एक अध्ययनले यसबारेमा नयाँ तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । पुरुषहरुमा निम्न गुण भए महिलाहरु आकर्षित हुने..
आजको समयमा सेल्फीको क्रेज जो कोहीमा पनि देख्न सकिन्छ । अत्याधुनिक मोबाइल फोनमा रहेका शक्तिशाली क्यामराहरुले मानिसहरुको सेल्फी कल्चरलाई बढावा दिइरहेका छन् । पछिल्ला वर्षहरुमा सर्वाधिक लोकप्रिय बनेको सेल्फीको इतिहासका बारेमा तपाईंलाई कत्तिको थाहा छ ? आधुनिक मोबाइल फोनमा सेल्फी क्यामरा आएसँगै..
दिनेश खनाल । चिनियाँ राज्य संयन्त्र (सरकार), आम चिनियाँ नागरिकहरु पनि आफ्नो काम र कर्तव्य प्रति अत्यन्तै जिम्मेवार छन् । संसारभर चिनियाँहरुको पहिचान भनेकै कुनै काम थालेपछि फत्ते गरेरै छोड्ने पहिचान छ । चिनियाँ सरकार पनि आफूले सुरु गरेका परियोजना समयमै सम्पन्न होउन् भन्ने चाहान्छ । तर, नेपालको..
काठमाडौं । भारतका पूर्व राष्ट्रपति डा. एपीजे अब्दुल कलाम विश्वभरका मानिसहरुका लागि एक प्रेरणा दिने नाम हो । उनी मिसाइल म्यानको रूपमा प्रख्यात छन्, जुन आज पनि धेरै युवाहरूका लागि रोल मोडेल हुन् । कुनै कारणले जीवनबाट निराश भएका युवाहरुलाई उनका शब्दहरूले अझै पनि प्रत्येकको हृदय छाउछ । उनले युवाहरूलाई..
द्वापरयुगको झण्डैझण्डै अन्त्यतिर सत्यवादी राजा युधिष्ठिर राजपाट नाति परिक्षितलाई सुम्पेर रानी द्रौपदी र चारभाइसहित ‘महाप्रस्थान’को यात्रामा लागे। चार भाइ र द्रौपदी पालैपालो युधिष्ठिरसँगबाट छुट्दै गए। जान पाएनन्। युधिष्ठिरको एक मात्र साथी थियो, कुकुर। जब स्वर्गबाट दूत लिन आए युधिष्ठरले..